Maxaa la sameeyaa haddii bisaddaydu aysan rabin inay cunto kibiskiisa | Bisadaha Noti
Maxaa la sameeyaa haddii bisaddaydu aysan rabin inay cunto kibble
Monica Sanchez | | Cuntada
Waxaa jira bisado aad ugu jilicsan cuntada, si aad u badan oo nagu qasbi kara inaan iibsanno noocyo kala duwan oo cunto ah illaa aan ka helno mid ay runtii jecel yihiin. Inbadan oo naga mid ah ayaa isweydiiyay in kabadan hal jeer waxa la sameeyo haddii bisaddaydu aysan rabin inay cunto croquettes, iyo dabcan, waa inaad wax cuntaa maalin kasta si caafimaadkaagu u fiicnaado. Haddii in ka badan 3 maalmood ay dhaafto oo aadan waxba cunin, jirkaaga ayaa bilaabaya inuu xanuunsado.
Si tan looga fogaado, waxaan kuu sheegayaa sababta ay tani u dhacdo, iyo waxa lagu sameyn karo si uu wax u cuno.
1 Muxuu bisaddaydu u rabin inay cunto kibibkeeda?
2 Maxaa la sameeyaa si loogu cunteeyo?
Muxuu bisaddaydu u rabin inay cunto kibibkeeda?
Waxaa jiri kara sababo dhowr ah oo sababta oo ah dhogorta aysan rabin inay wax cunaan. Xaaladaha badankood waa wax fudud sababtoo ah ma jecla dhadhanka, laakiin mararka qaarkood waxay noqon kartaa wax aad u daran, sida dhibaatooyinka afka, raaxo la'aan ama calool xanuun, iwm Marka sidee loo kala saaraa sabab culus iyo mid kale oo aan ahayn? Isagoo xusay astaamaha aad leedahay.
Haddii ay dhacdo inuu cudur ku dhaco, waxaad arkaysaa inuu yahay mid aan dan ka lahayn, oo uu maalintii ku seexdo meel gees ah. Waxaa laga yaabaa inaad matagto, shuban, ur xun, aad cabto biyo aad uga badan inta caadiga ah, suuxdin ama dawakhaad, iyo kuwo kale. Markii laga shakiyo in xayawaanku uusan fiicnayn, waa lagama maarmaan in loo qaado dhakhtarka xoolaha si aad u baarto.
Laakiin haddii bisaddu fiicantahay, markaa waxaad heli doontaa bisad aad ugu qaas ah cuntada with.
Maxaa la sameeyaa si loogu cunteeyo?
Waxay ku xirnaan doontaa sababta. Haddii uu buko, daaweynta xoolaha uu si tartiib tartiib ah u soo hagaagayo oo ay caadi tahay inuu ku soo noqdo hungurigiisa dhowr saacadood illaa maalin kadib markii la daweeyay. Hase yeeshe, iyadoon loo eegin waxa ku dhaca isaga, gurigaaga waxaad ku sameyn kartaa dhowr waxyaalood si aad ugu cuntid:
Ku dar xoogaa saliid saytuun ah.
Isku qas maraq digaag ah (laf la aan).
Beddel quudinta mid aan badar lahayn.
Sii quudin qoyan.
Tan, bisad kasta waa inay uga tagtaa quudiyaha nadiif ah 😉.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Maxaa la sameeyaa haddii bisaddaydu aysan rabin inay cunto kibble
Bisaddaydu waa bil iyo badh, waxaan imid gurigeenna toddobaad ka hor, waxaan siiyay croquettes maalmihii ugu horreeyay laakiin waxaan arkay inay si dhib leh ku cunayso laakiin iyadu way cunday, waxaan u soo bandhigay wax yar oo cunto qoyan ah oo ay sii weydo wuxuu jecel yahay croquettes kaliya cuntada qoyan ee croquettes mar dambe uma soo dhowaado ama urin maayo, sida looga dhigo inuu mar kale u cuno
Waxaan kugula talinayaa inaad isku darto cuntada qoyan iyo quudinta. Waqtiyada ugu horeeya waxay dhigaayaan cunto badan oo qoyan, oo si tartiib tartiib ah wax yar ugu dar.
Tani waxay kugula qabsan doontaa quudinta mar labaad.
Yanet del Carmen Pérez escobar dijo
Bisadaydu ma rabto inay cunto croquette, wuxuu doonayaa oo keliya nuugaan saafi ah waxaana durba jira laba jawaan oo cunto ah oo uu iga tago, waxaan dareemayaa inuu caajis yahay inuu wax cuno ….
Jawaab Yanet del Carmen Pérez escobar
Isku day inaad isku qasto nuugga 'croquettes'. Maalmihii ugu horreeyay waxay sifiican uga sii jilicsan yihiin croquettes, waxyarna tartiib tartiib ayey u yaraanayaan.
Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad isku daydo inaad siiso nooc kale oo quudin ah. Kuwa aad sheegayso waxay leeyihiin badar fara badan iyo hilib yar. Hadday suurtagal tahay, waxaan kugula talin lahaa in la siiyo Applaws, Dhadhanka duurjoogta, Acana, Orijen ... Way ka qaalisan yihiin, laakiin intaad hilib badan qaadatid waxaad u baahan tahay tiro ka yar sidii aad u buuxin lahayd, marka ugu dambeysa waxay u soo baxaan si isku mid ah .
Gianella Isabel Neira dijo
Seddex bilood ka hor, bisaddeydu waxay dhashay seddex nirgood, waxaan siiyay gabadha hadiyad waxaanan la joogay ragga, midkood wuxuu jecelyahay buskudka midka kalena wuu fiiriyaa oo wuu iska tagaa, laakiin labadooduba way sii nuugi jireen
Si aan taas uga jaro, waxaan go aansaday inaan qaato xaqiiqda ah inaysan jecleyn buskudka ay ayeeyday ku jirto si ay ugu barato cunitaankeeda maadaama aysan hooyadeed lahaan doonin.
Laakiin waa muddo toddobaad ah mana doonayo buskudka, wuxuu cunaa oo keliya hilib iyo caano
Ma aqaan wax aan sameeyo
Jawaab Gianella Isabel Neira
Waa salaaman tahay Gianella.
Waxaan kugula talinayaa inaad isku dardarto hilibka digaagga. Sii wad inaad ku darto hilib yar oo ka sii yaraanaya ilaa uu la qabsanayo croquettes.
Ikhtiyaar kale ayaa noqon lahaa in la siiyo cunto bisad oo qoyan, oo isku mid ah, ku qas iskudhafka.
Waa inaad dulqaad yeelato, laakiin aakhirka hubaal waad la qabsan doontaa.
Waad salaaman tihiin, dhibaato ayaan ku qabaa bisadeyda, wuu xanuunsaday ilaa meeshaasna ma doonayo inuu cuno saxaradiisa, wuxuu cunaa oo keliya digaag, beer, tun. Laakiin ma leh croquettes
Ku jawaab Evelin
Waxaad ku qoyn kartaa croquettes maraq digaag ah oo guriga lagu sameeyo, ama xitaa sameyso isku dar ah croquettes iyo digaag leh beerka. Digaag iyo beer badan sii bilowga si ay ula qabsadaan tartiib tartiib. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad xoogaa xoqdo.
Iyo samir. Ma jiro hehe kale 🙂
Mimi kelan dijo
Bisadaydu ma rabto inay nadiifiso quudintiisa, wuxuu had iyo jeer ka tagaa xoogaa croquettes ah mana u suurtagelin inuu cuno, had iyo jeer waa isku mid ...
Jawaab Mimi Kelan
Ha walwelin: bisadaydu sidoo kale ma nadiifiso. Waa iska caadi.
Galab wanaagsan, bisadayda 7 jirka ah waxay leedahay dhibaatooyin kalyaha ah marka laga reebo xanaaqa cirridka (cuncunku wuxuu ku badan yahay dhinaca bidix, wuxuu wax badan ka cunaa dhinaca midig). Dhibaatada kelyaha waa mid daba dheeraatay, mar hore ayuu isbitaal la seexiyay wuxuuna hoos u dhigay dhibic abuur ah oo ahayd 4.3, ka hor inta uusan u qaadin dhakhtarka xoolaha oo uu si caadi ah u cuno, waan ugu dhowaa si aan u arko inuu wax cunayo, laakiin hada wuu baxay Isbitaal dhigistiisa, horey usbuuc ka hor, wax walba waa wax fiican, ka hor intaanan u jeclaan jirin oo uu cunay in ka badan waxa uu cuno hadda, xitaa waxaan u iibsaday Ricocat of pate uu cunay oo keliya hal maalin, maalinta xigta ee uusan rabin, wuxuu cuni jiray k / dkiisa kubbadaha yar yar (wax badan maahan), laakiin way sii adkaaneysaa oo sii adkaaneysaa. Cabsida aan qabo ayaa ah inuu markale soo laabto, waxa wanaagsan ayaa ah inuu biyo badan cabbo, laakiin markii aan qirtay waxay ahayd sababtoo ah saxaradiisa ma heysto Doc-na wuxuu ii sheegay inay tahay in si fiican loo quudiyo oo loo waraabiyo. Xitaa kuma qasbi karo inuu waxbadan cuno, xitaa siliinge, maxaa yeelay waxaan ku dhuftay cirridkiisa, sidee wax u murugsan yihiin! Immisa jeer ayey bisadu cuni kartaa maalintii? Waxaan ku siinayaa sacab muggeed oo quudin ah seddex jeer maalintii walina waan u daayaa si aan u jaangooyo, qayb walbana 10 jeer ayay "ka daadin doontaa" mana ahan in wax badan la qabsado laakiin dhawr kubadood.
Ku jawaab Roxana
Waa salaaman tahay Roxana.
Bisad caafimaad qabta waxay wax cuntaa inta u dhexeysa 3 iyo 5 jeer maalintii, celcelis ahaan 200g 24-kii saacadoodba (waxay kuxirantahay da'da iyo culeyska).
Isku day inaad ku qoyso biyo ama caano (laaktoos-la'aan ama la kariyey).
kayga ayaa kaliya bilaaba weydiisashada cuntada markii aan siiyana ma doonayo, waxaan siiyaa wax walba oo ma ihi
C / salaam cumar.
Ma isku dayday inaad ku dhex qasto wax yar oo laaktoos-la'aan ah ama caano riyaha?
Haddii uusan weli rabin, waxaan kula talin lahaa in la geeyo dhakhtarka xoolaha si loo arko haddii dhibaato ku hayso afkiisa.
NORA CECILIA GUTIERREZ dijo
Galab wanaagsan, waxaan hayaa labo bisadood oo labo jir ah, wax yar ma cunaan mana jecla kalgurtiyada kaligood, waxay cunaan oo keliya kalluunka lagu tunto laakiin ma badna mararka qaarkood waxaan ka imid shaqada oo cuntada oo dhan ayaan uga tagayaa. subaxdii, dhakhtarka xoolaha ayaa dhaha inay khiyaano ku leeyihiin cuntada waxaan siiyaa dadka waaweyn BALANCE croquettes iyo FANCY FEAST TUNA. Ma aqaano inay jiraan wax summad ah oo taajir ka ah. Waxaan ka walwalayaa inay caato yihiin, maxaan sameeyaa ???
Jawaab NORA CECILIA GUTIERREZ
Waa salaaman tahay Nora Cecilia.
Cunnada bisadaha ugu fiican waa tan aan ku jirin badar ama wax soo saar.
Ma aqaan magacyadaas, raalli ahow.
Sikastaba, iskuday inaad cuntadooda kuqusho caano aan lahayn laktoosi. Waxay u badan tahay, inay sidan wax u cuni doonaan
Juan Diego Guillen dijo
Bisadaydu waxay caadaysteen inay cunaan hilib ama digaag oo keli ah markay biskit cunaan (mararka qaarna qasab) xoogaa kadib wey matagtaa, ma garan kartaa waxay haysato?
Jawaab Juan Diego Guillén
Nabadoon Juan Diego.
Markaad tirinaysid, isagu ma doonayo inuu cuno kibble.
Haddii aad siin kartid hilib, wax walboo fiican ayaa jira. Haddii kale, ku dar iskudhafka 'croquettes', adoo kudaraya hilib yar iyo kayar. Laakiin ha ku qasbin inay wax uun cunto maxaa yeelay way iska joojin kartaa cunista.
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa 2 bisadood, kii ugu horeeyey ee aan haynay ku dhowaad 2 sano, waxaan siineynaa kibbles-kaloriin yar-yar maxaa yeelay waxay u nugul yahiin culeys kordhin iyo bil ka hor waxaan keenay bisad 8 bilood jir ah, dhibaatadu waxay tahay bisadu way ka yartahay waana ka khafiifsan tahay waxaana siinaa cunno kala duwan oo nooca Nupec ah oo loogu talagalay bisadaha guriga, laakiin wuxuu umuuqdaa inuu necebyahay ilaa iyo inta uu ka joojinayo cunida cunidiisa inuu cuno cunnadayda bisadda weyn ee kalooriga leh.
Ma jirtaa waddo isaga looga dhigto sidiisa oo kale ama noocee cunto ah oo aan siinno? Uma maleynayo inay tahay inaan isaga siino isla kuwa ay bisadeyda kale cunaan.
Waxaan kugula talinayaa inaad labadaba siiso quudin aan lahayn badarka. Ma aqaano haddii noocyadan ay ku yaalliin aaggaaga, laakiin aad ayaa loogu talinayaa:
Dareen run ah
Noocyadan ayaa quudiya bisadaha ama bisadaha la nadiifiyay ee leh saadaalinta miisaanka, iyo sidoo kale kittens.
Si loo hubiyo in aysan cunin labada saxanka kale, waxaad isku dayi kartaa inaad la qabsato inay wax ku cunaan qolal kala duwan, inta u dhexeysa 4 iyo 6 jeer maalintii.
Bisadeeydu waa cunug, wax yar ayaan uga tagay qashinkeeda waqtigeeda laakiin waxay ila joogtay seddex maalmood waxaanan siinayay caano iyo croquettes laakiin ma cuno croquettes waxaanan dareemayaa in siinta caano oo kaliya aysan sameyn doonin iyada wax kasta oo wanaagsan ... Maxaan sameeyaa oh maxaad igula talinaysaa inaan sameeyo
Waa salaaman tahay Faadumo.
En maqaalkan waxaan kuu sharxeynaa sida loo daryeelo bisadaha yar yar.
Waad salaaman tahay, waan walwalsanahay, bisadeeydu mar hore way cayilanayd, da'diisu waa 3 bilood jir. timuhu waxay leeyihiin ur qariib ah, maxaan sameyn karaa, fadlan i caawi?
Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto dhaqtarka xoolaha, maadaama ay suurta gal tahay inuu dhab ahaan afka ku haysto wax isaga dhibaya ama wax u dhimaya.
Waxaan rajeyneynaa inay hagaagto. Salaan.
Labadaydu waa 6 bilood jir illaa iyo markii ay 4 jir ahaydna ma doonayso inay cunto croquettes, keliya jawaano iyo gasacado, maxaan samayn karaa?
Waad salaaman tahay Laura.
Waxaad isku dayi kartaa inaad ku dhex qasto quudinta digaag ama maraq kalluun, si markaas ay u dareento soo jiidasho badan urta. Ama ku qas qasacado wax yar oo quudin ah, oo si tartiib tartiib ah ugu dar daasad yar sidii aad ugu baratay.
Haye, waxaan qaatay bisad yar qiyaastii laba bilood jir (way ka yaraan kartaa) waxaanan isku dayay inaan siiyo kibble laakiin wuu diiday inuu cuno, kaliya wuxuu cunaa xoogaa digaag ah iyo baakadaha raashinka bisada kuwanna waxay u keeneen dhibaato marka uu musqusha aado . Maxaan sameyn karaa si aan ugu qanciyo inuu cuno croquettes? Xitaa markaan isku daro suufka, isagu ma doonayo inuu u dhowaado saxanka.
Iyo su’aal kale, da'daas miyay wali caano cabayaan hadaan tuhunsanyahay inuu kala tagay hooyadiis? Caanaha lo'da miyaa lagula taliyaa bisad?
Ku jawaab Diane
Caanaha lo'da ayaa waxyeello u leh kittens-ka maadaama aysan dheefshiidi karin laktoos. Waxaa ugu wanaagsan in la siiyo caano laga soo iibsaday rugta caafimaadka xoolaha, ama dukaanka sahayda xoolaha, gaar ahaan bisadaha.
Si loo bilaabo cunista cunnooyinka adag, waxaa la doorbidaa in lagu bilaabo adoo siinaya cunto qoyan, taas oo ah, gasacadaha, ama baat ama qaybo ku jira maraqa, kittens. Waxaad ku qaadataa wax yar farahaaga, oo waad gelisay jilicsan afka.
Weli ma cuni kartid kibble maxaa yeelay ilkahaagu weli kuma filna. Waqti sii.
Carolina rodriguez dijo
Waxaan hayaa bisad 9 bilood jir ah, waxaan siinayay quudin aan laheyn borotiin badan oo xayawaan ah, waxay laheyd borotiin khudradeed ah, wey jeceshahay, laakiin waxaan ka helay quudin leh borotiin badan oo asal ahaan ka soo jeeda xoolaha, waxay leedahay kalluun , salmon, digaag, waan u beddelay quudintaas, laakiin isagu ma jecla quudinta, wuxuu leeyahay ur aad u xoog badan, maxaan sameyn karaa, ma inaan uga tagaa quudkii hore ama sideen uga dhigi karaa isaga sida quudinta cusub.
Jawaab Carolina Rodriguez
Waa inaad isku dardartid labadaba muddo bil ah, adoo hoos u dhigaya wax ka yar "duugga ah" iyo inbadan iyo in ka badan oo ah "cusub".
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad ku qoyso midka cusub caano aan lahayn laktoosi.
Alejandro Garzon dijo
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, bisadaydu waxay dhibaato ka haysataa cunista croquettes-kiisa, markasta oo uu wax cuno wuxuu ka bilaabayaa afkiisa inuu u dhaqmo sidii inuu ku dheggan yahay, sida inuu cunaha wax ku qabo, wuxuu cunaa cunno qoyan laakiin isla wixii aan hore u soo sheegnay dhacaya. Muxuu noqon karaa ???
Jawaab Alejandro Garzón
Waxaa laga yaabaa inay kugula talin laheyd inaad la xiriirto dhakhtarka xoolaha, maxaa yeelay waxay noqon kartaa inuu dhibaato ku qabo afkiisa oo u diidaya inuu si caadi ah wax u cuno.
Salaam cun. Ma wanaagsan tahay in la siiyo cunto qoyan oo keliya? Mise waa maxay croquettes aad ku taliso?Waxaan iibsaday kuwa dukaanka weyn.
Waxaan ku noolahay Mexico.
Jawaab Adriana López
Waxaad siin kartaa cunno qoyan dhib la'aan. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kugula talineynaa in aanad siin wax ay ku jiraan badarka.
Labadaydu waa 4 bilood jir mana doonayso croquette-keeda, waxaan u iibsaday kuwa ugu qaalisan oo ah bisada loo yaqaan 'purina cat chow' oo iyadu ma rabto, waxaa hore u jiray waqtiyo ay cunayso laakiin waxay ku riixday saxankeeda oo wali oohinta gaajada
Ku jawaab Jimena
Jimena waa salaaman tahay.
Miyaad isku dayday inaad saliidda kalluunka dusheeda ku shubato? Waxaa laga yaabaa in sidaas aad kuheli karto inuu cuno.
Salaam, bisadeyda, tan iyo markii ay dhalatay, waxay cuntay hilib iyo cuntadii dadka oo kaliya, waxaan u kaxeeyay dhakhtarka xoolaha wuxuuna ii sheegay inay cunto croquette sababtoo ah ma yeelan doonto dhibaatooyin badan laakiin ma aysan cunin croquette oo iyadu ma xiiseynayo waxa uu sameyn karo si ay uga dhigto mid cunaysa.?
Ka jawaab Mario martinez
Haddii aad awooddo, codso in lagaa baaro dhiig dhammaystiran. Waa haddii ay hagaagsan tahay, wax macno ah ma leh in wax kale la siiyo.
Waxaa wanaagsan in hilibka iyo cuntada dadka u wanaagsan la cuno kibbleyaasha, kuwaas oo inta badan hodan ku ah badarka oo aan wax badan u tari doonin xayawaanka hilibka cuna.
Xander rivera dijo
Waxaan haystaa 2 bisadood, labaduba waa 3 sano iyo badh, dheddig iyo lab
Bisaddu waxay cuntaa croquettes iyo nooc kasta oo hilib ah oo aad siiso dhibaato la'aan.
Bisaddu waxay cuntaa croquettes iyo hilib aad dhif u ah. Waxaan jeclaan lahaa inuu u cuno si ka duwan sidii hore
Ka jawaab Xander Rivera
Bisaduhu waa xayawaan caado u leh. Haddii bisaddu aysan jeclayn inay cunto hilibka, ha ku qasbin. Waxa aad samayn kartaa waa isku -darka cuntada, oo si tartiib -tartiib ah ugu dar maraqa yar iyo hilib badan.
Laakiin haddii aadan rabin ama aadan jeclayn, waxaa fiicnaan lahayd inaad sii wadato cunista croquettes.
Waxaan haystaa laba kitti oo mar dambe ma rabaan kibladoodii haddii ay miiska saaran wax ay xadaan si ay u cunaan xitaa waxay galeen qashin, mar walba waxay dalbadaan cunto laakiin maraqa ma rabaan, ma garanayo haddii dhibaatadu ahayd inay iyagu joojiyay inaan arko muddo ka badan bil oo Hadda waan soo noqday waan sameeyay laakiin ilmo dhashay, ma eegaan mana taabtaan maxaa yeelay wuxuu qabaa dysplasia sambabada, wuxuu ku jiraa ogsijiin. Waxaan u keenaa walaac
Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay imaanshaha ilmaha ee qoyska (dhanka, waxaan rajeyneynaa in midka yar si dhaqso ah u roonaan doono) noloshooda. Taasi waa, hubaal inay dareemeen walaaca, xiisadda, dhammaan dareenkaas oo qoysku lahaa iyo / ama lahaa. Dabcan, dhammaan xiisaddaas iyo welwelkaas ayaa iyagana carrabka ku adkeeyay, maadaama ay aad ugu nugul yihiin shucuurta dadka kale.
In la sameeyo? Waa hagaag ... waa inaad ka bilowdaa aadanaha. Haddii aadanuhu deggen yahay oo dabacsan yahay, waxaa la filayaa in bisaduhu si tartiib tartiib ah u fahmi doonaan inaan wax xun ku dhicin iyaga. Fikirka, socodka, jimicsiga neefsashada, muusikada nasashada. Soo hel wax aad jeceshahay inaad samayso, oo ku nasiya.
Iyo daqiiqadahaas oo aad dareento wanaag, deggenaan, markaa waa marka ay habboon tahay inaad ku ciyaarto bisadaha si ay iyaguna u soo saaraan xiisaddaas.
Waa inaad noqotaa mid dulqaad badan, oo ha filan isbeddel habeen dhan waayo taasi ma dhacayso. Laakiin iyagoo joogto ah marba marka ka dambaysa way dejin doonaan.
5 Waxyaabaha Bisaduhu Necebyihiin Aadanaha
Sida loo bogsiiyo nabarrada bisadaha ku jira